सौगातको हुलिया ! - फिचर - कान्तिपुर समाचार
सौगातको हुलिया !
असार १८, २०७३-‘कबड्डी कबड्डी’लाई छोड्ने हो भने ‘लुट’पछि सौगात मल्लका कुनै फिल्मले गतिलो व्यापार गरेका छैनन् । तर फिल्म फ्लप भए पनि सौगातको चरित्र र अभिनय अक्सर हिट नै हुन्छ । हरेक फिल्ममा फरक चरित्रमा देखिनु उनको ट्रेडमार्क बनिसकेको छ । पछिल्लो उदाहरण हो, ‘लुकामारी’ फिल्मको आँखा डेरो भएको पात्र । ११ गतेदेखि प्रदर्शित यस फिल्मले व्यापार ठीकठाक मात्र गर्‍यो तर सौगातले पर्याप्त चर्चा बटुले । उसो त चर्चाको शृंखला लुकामारीको ट्रेलर रिलिज भएपश्चात् नै सुरु भएको थियो ।
निर्देशकको कथामा फिट हुने पात्र उनी आफैं जन्माउँछन् । कम्तीमा पात्रलाई चाखलाख्दो र निपुण बनाउन प्रभावकारी ‘इनपुट’ दिन्छन् । ‘लुकामारी’को सबालमा पनि यही भएको थियो । सौगातका अनुसार निर्देशक श्रीराम दाहालले स्टोरी पिच गर्दा मधेसबाट आएको पात्र भन्ने मात्र थियो । त्यसको हुलिया, बोल्ने शैली र शारीरिक बनोट तय भएको थिएन । ‘मैले अहिलेसम्म आँखा डेरो भएको पात्र पर्दामा देखेको छैन, लुकामारीको पात्रलाई म्याच हुन्छ भन्ने लाग्यो,’ भिन्न भूमिकामा लगाव राख्ने यी अभिनेता भन्छन्, ‘त्यसैले आफैंले ट्राई मारें । मलाई त खासै चित्त बुझेको हैन तर दर्शकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छु ।’
नवलपरासीमा हुर्किएका सौगातको बच्चा बेलैमा आँखा डेरो भएका साथीहरू थिए, उनी त्यसकै नक्कल गर्थे । आँखा हल्का दुख्थ्यो, तैपनि दुरुस्तै नहुन्जेल अभ्यास गरिरहन्थे । अभिनयमा रस पस्दै गएपछि उनलाई कुनै न कुनै पात्रमा घुसाउने रहर थियो, लुकामारीमा त्यो चाह पूरा भयो । तर लामो समययता आँखा बाङ्गो बनाएर हेर्ने अभ्यास नगरेकाले सुरुमा केही गाह्रो भएछ । पछि त बानी परिहाल्यो ।
बिस्तारै सौगात पात्रमा कति भिज्दै गएछन् भने निर्देशकले एक्सन भन्नुअगाडि नै आँखा डेरो बनाएर बस्थे । सुटिङ भइन्जेल घरमा एक्लै हुँदा पनि बेलाबेलामा आँखा डेरो पारेर हेर्ने गरेको उनले सुनाए । जसले गर्दा धेरै टेक दिइरहनुपर्दैन्थ्यो । भन्छन्, ‘यस्ता हाम्रो वरपर देखिने तर फिल्ममा नदेखिएका धेरै चरित्रमा गृहकार्य गरिरहेको हुन्छु । जुन फिल्ममा फिट हुन्छजस्तो लाग्छ, त्यसमा घुसाउँदै जान्छु ।’ आखिर त्यत्तिकै बनेको पनि त होइन नि, उनको ‘एक्टर–डाइरेक्टर’को इमेज ।